Khilaafka PSF ee Deni iyo reer Diyaano oo xal loo waayay | KEYDMEDIA ONLINE
Khilaafka PSF ee Deni iyo reer Diyaano oo xal loo waayay
Hay'adda waxaa maal-geliya Mareykanka, oo Wasaaradda Gaashaandhigga kala shaqeyso la dagaalanka argagaxisadda Puntland.
BOOSAASO, Soomaaliya - Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Gaas ayaa sheegay inay aad u yar tahay rajada laga qabo in xal laga gaaro khilaafka ka taagan hay'adda PSF-ta.
Isimada ku heybta ah Maxamuud Cismaan Diyaano, agaasimaha uu Deni xilka ka qaadey 24-kii November ayaa la sheegay in aysan diyaar u ahayn in hay'addan la hoo-geeyo Saciid Deni.
Madaxweyniyaal hore, Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland, Siyaasiyiin iyo Odayaal ayaa maalmo wadahadal ka wadey Boosaaso, kuwaasoo kusoo guuleysan waayay xalinta khilaafka.
Mudadii waan-waanta socotay, waxaa la sheegay in wafdiga uu qeybta ka ahaa C/weli Gaas in lasoo hordhigay shuruudo adag oo xilka uu ku wareejinayo agaasimaha hay'adda PSF-ta.
Waxaa kamid ah in agaasimaha uu Deni xilka ka qaadey uu xafiiska sii joogo, oo dib u habeyn ku sameeyay Ciidanka PSF-ta ee kala qeybsamay iyo in xarunta ay degan tahay hay'adda iyo Hubkuba isaga lagu wareejiyo.
Isimada Boosaaso ayaa shuruudaha iyo kuwa kale soo bandhigay, iyadoo uu Deni gaashaanka u daruuray in hantida hay'adda PSF-ta lagu wareejiyo shaqsi, taasoo dhaawacaysa nidaamka ka jira Puntland, islamarkaana horseedaysa musuq-maasuq.
C/weli Gaas ayaa sheegay in khilaafka taagan xalkiisa waqti badan qaadan doono, hadii ay jiraan shuruudahan, oo maamulka Deni doonaynin inuu fuliyo, maadaama shaqsina doonaynin inuu tanaasul sameeyo labada dhinac.
Hay'adda waxaa maal-geliya Mareykanka, oo Wasaaradda Gaashaandhigga kala shaqeyso la dagaalanka argagaxisadda Puntland. Dhaqaale badan ayay ka helaan reerka Maxamuud Diyaano, oo ah aas-aasaha PSF.
Horey ayay madaxdii ka horeysay Deni ugu fashilmeen inay la wareegaan taliska hay'adda ama bedelaan. Sababta qoyska Diyaano u diidan yahay inuu wareejiyo PSF ayaa ah dhaqaalaha dartiisa, maadaama ay tahay neef irmaan, oo ay lacag la lisayaan.